4 Cunsur oo Lagu Kicinayo Jiilka Hogaaminaya Iswada Suuqaynta | Martech Zone
Cilmi baaris laga helay Daraasada otomaatiga suuq-geynta ee Venturebeat waxay muujineysaa, marka laga reebo kala duwanaanta astaamaha barnaamij kasta, caqabadda ugu weyn ee suuqgeynta otomatiga ee ganacsiga waa fahamka sida ay ugu habboon tahay ururkooda.
Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay arrinta… shirkadaha ay isku dayayaan inay otomaatiga suuq geynta halkii laga heli lahaa barxad horeyba ugu habboonayd hawlahooda gudaha, xooggooda iyo ilaha ay leeyihiin. Waan ka daalay ugu fiican ee liisaska otomaatiga suuq geynta ama xitaa habab afar geesle ah. Markaan u qabano xulashooyinka iibiyeyaasha macaamiisheenna, waxaan qiimeyneynaa dhinac kasta oo ka mid ah ururkooda si aan u helno barxadda saxda ah - ama xalka saxda ah ee meelaha saxda ah lagu mideyn karo. Way ka sahlan tahay in la dhiso xal halkii laga beddeli lahaa dhammaan howlaha iyo dhaqanka urur.
Taasi waxay tiri, weli waxaa jira jiilka led fursadaha maalgashiga madal otomaatig suuq geyn ah. Halkan waxaa ah 4 walxood oo ay TechnologyAdvice iftiimisay oo horseedaysa natiijooyinka jiilka hogaaminta:
Wadashaqeynta Iibka - waxay abuuri kartaa 20% kordhinta fursadaha iibka.
Ololeyaal faleebo Email - emaylku wuxuu u eg yahay 3x inay si dhakhso leh u iibsato marka loo eego warbaahinta bulshada.
Goobaha Bogagga - adeegsiga otomaatiga oo lala kaashanayo bogagga soo degitaanka waxay sababi kartaa sicirrada u beddelashada illaa 50%.
Shakhsiyeynta iyo A / B Imtixaanka - emayllada shaqsiyeed waxay soo saaraan 6x dakhliga marka la barbardhigo emayllada aan shaqsiga ahayn.
Tags: imtixaanka abololeyaal faleeboololeyaasha qulqulaya e-maylboggaga soo degayajiilka ledshakhsi ahaaneediskaashiga iibka